राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै, विद्या भण्डारी नै दोहोरिने | My News Nepal
राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै, विद्या भण्डारी नै दोहोरिने
काठमाडौं । राष्ट्रपति चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ ।राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेकी विद्यादेवी भण्डारी र कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राई उम्मेदवार छन् । वाम गठबन्धनसहित अन्य साना दलको पनि समर्थन पाएकाले भण्डारी नै पुनः राष्ट्रपतिमा दोहोरिने पक्का छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि छुट्टा–छुट्टै मतपत्र र मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि हरियो तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुका लागि रातो रंगको मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मतदातालाई आफू सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रमध्ये कुनै एउटा कागज बोकेर मतदानका लागि आउन अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रियसभामा मनोनित डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेल राईले भने मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन् । उनीहरुको शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा एक दिनअघि नै अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित भएकाले तीन जना सदस्यहरुले मतदानमा भाग लिन नपाउने भएका हुन् ।
प्रदेशसभामा मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को नाम पनि अन्तिम नामावलीमा छैन । अदालतबाटदोषी प्रमाणित भई सजाय सुनाइएका मनाङे फरार छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा) का ३३१ र प्रदेशसभाका ५४९ सदस्य गरी ८८० मतदाता कायम गरिएको छ ।
कानुनअनुसार कुल मतदाताको ५० प्रतिशत बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछन् । संघीय संसदका ३ सय ३४ जनाको मतभार २६ हजार ३ सय ८६ तथा प्रदेशसभाका ५ सय ५० जनाको कुल मतभार २६ हजार ४ सय हो । तर, आयोगले मतदाता नामावलीमा ८ सय ८० जनाको नाम मात्रै प्रकाशित गरेकाले उनीहरूको कुल मतभार ५२ हजार ५ सय १ हुन्छ । त्यसअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यक्तिले २६ हजार २ सय ५१ मत ल्याउनुपर्छ । एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनकै मतदाताबाट उक्त मत पुग्ने देखिन्छ ।
मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहने राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।